धारा १७ को उपधारा २(ख) पढ्नुस प्रधानमन्त्रीज्यू, कि त्यो पनि वि’घटन भएको हो? «
धारा १७ को उपधारा २(ख) पढ्नुस प्रधानमन्त्रीज्यू, कि त्यो पनि वि’घटन भएको हो?
प्रकाशित मिति :9January, 2021 11:19 am
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिमको धनगढीमा सम्बोधन गरेको कार्यक्रमबाट केही युवाहरूलाई एकाएक प’क्राउ गरियो। उनीहरूले कुनै हुलदंगा गरेका थिएनन्, न कुनै नाराबाजी गरेका थिए।उनीहरू प’क्राउ पर्नुको कारण थियो, उनीहरूले लगाएको टिसर्ट।
ती युवाले ‘निर्मला पन्तको बला’त्कारी खै ?’ भनी लेखिएको टिसर्ट लगाएका थिए। दुई वर्षअघि कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार गरी हत्या भएको थियो। प्रहरीले अहिलेसम्म दोषी पक्राउ गर्न सकेको छैन। सरकारले दोषी पक्रन नसकेको भन्दै लामो समय आ’न्दोलनसमेत भएको थियो।
उनै निर्मलाका ब’लात्कारी तथा ह’त्यारा खोइ भनी प्रश्न गरिएको टिसर्ट लगाएर कार्यक्रममा शान्तिपूर्वक बसेका युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। संविधानविपरित संसद विघटन गरेर आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यक्रममा यसरी युवाहरू विनाकसुर पक्राउ पर्नुलाई सर्वसाधारणले सामान्य रूपमा लिएका छैनन्। सरकारको यो कदमविरूद्ध सामाजिक सञ्जालमा व्यापक वि’रोध सुरू भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत सरकारको कदम ‘लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत भएको’ भन्दै ट्वीट गरे। अरू धेरै ट्वीटर प्रयोगकर्ताले पनि अहिले ‘निर्मला पन्तको बला’त्कारी खोइ’ भन्दै प्रश्न सोधेका छन्।
शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने अधिकारलाई प्रहरीको उक्त कदमले हनन गरेको धेरैको जिकिर छ। उनीहरूले संविधानले दिएको शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने हक पनि विघटन भएको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
ट्वीटर प्रयोगकर्ता अशोकदास नेपालीले ट्वीटरमा भनेका छन्- ‘यो त मौलिक हकअन्तर्गत संविधानको धारा १७ २(ख) स्वतन्त्रताको हकविपरीतको कार्य पनि हैन र ? कस्तो गल्ती गरेर गयौ नि बहिनी तिमीले, तिम्रो नाम लेखेर प्रश्न गर्ने पनि अब त देशद्रोही हुने भए।’
संविधानमा शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने अधिकार मौलिक हक भएको उल्लेख छ। संविधानको धारा १७ को उपधारा २ (ख) ले विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। कैलाली प्रहरी प्रमुख तथा एसपी अनुपमशमशेर राणाले भने उक्त टिसर्ट लगाउने युवालाई सुरक्षा दिन छुट्टै राखिएको बताएका छन्।
‘एउटा प्रसंगको कार्यक्रममा अर्कै प्रसंगको माग उठाएर टिसर्ट लगाएको थाहा पाएपछि क्राउडमा हुलदंगा होला भनेर हामीले छुट्टै राखेका हौं, उनीहरूको सुरक्षाका लागि भनेरै हो,’ उनले भने, ‘कानुनको कुरै भएन नि, उनीहरूलाई भीडबाट अलग्गै राख्नुपर्छ भन्ने कमनसेन्स प्रयोग गरेरै राखेको हो। यो कुरा सामान्य नै हो।’
यसरी शान्तिपूर्वक भेला हुनेलाई प्रहरीले दु’र्व्यवहार गरेको यो पहिलोपटक भने होइन। केही समयअघि काठमाडौंको बबरमहलस्थित कार्की ब्याङ्केटमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ओली समूहले गरेको भेलामा कालो मास्क लगाएर पुगेका युवालाई प्रहरीले फर्काइदिको थियो।